နိုင်ငံတကာသတင်း - ThutaStar
ဝင်းနဲ့ ​ဇော်​အတွက်​ခိုင်​မာတဲ့သက်​​သေရှိ​နေပြီ ထိုင်းအစိုးရသို့ ဒီဂစ်တာသမားဘယ်မှာလဲ. သွေးစွန်းနေတဲ့ဂစ်တာရယ် လက်က ဒဏ်ရာရယ်ကြည့်ရင်သိပြီသူကိုဘာလို့လွတ်ပေးလိုက်တာလဲ. မင်းတို့လိမ်စဉ်အားလုံးငါတို့တွေအကုန်သိနေတယ်.အရှက်သိက္ခာမရှိတော့ဘူးလားမင်းတို့နိုင်ငံသိက္ခာကျမှာကြောက်လို့ငါတို့နိုင်ငံသားကိုထိုးကြွေးလိုက်တာလဲ အားလုံးသိနေတယ်.မင်းတို့ပိုလိမ်လေ မင်းတို့သိက္ခာပိုကျလေဘဲ.သူဘယ်မှာ​နေလဲသူနိုင်ငံတော့​မေ့နေပြီး-လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်​နေ့မနက်ကျွန်းကနေခွာပြီးဘန်ကောက်မှတစ်​ဆင့်သူနိုင်ငံကိုတန်းပြေးတယ် ထိုင်းရဲတွေအမှုစစ်နေတဲ့တစ်​လျှောက်လုံးကသက်သေ​နေရာမှာဒီလူကိုဖျောက်ထားတယ်သူ့နိုင်ငံအစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးသက်သေထွက်ခိုင်းရင်အဖြေပေါ် ပြီ သူက အဓိကသက်သေ. များများShare​ပေးပါ ခင်​ဗျာ သူ့လက်က ဒဏ်ရာနဲ့သွေးစွန်းနေတဲ့ဂစ်တာ.ကသက်သေ.လို​​ပြော​နေကြတယ်​.ဒီပုံတွေမှာအဖြေရှိတယ်.လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုက ဝင်းနဲ့ဇော်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ..လူသတ်မှုဖြစ်ပြီးမနက်အစောကြီးသွေးစွန်းနေတဲ့ဂစ်တာသမား သူလက်က ထိုးသွင်းဒဏ်ရာနဲ့သေသူရဲ့ဦးခေါင်းပိုင်းက ထိုးသွင်းဒဏ်ရာက တူနေတယ်.အဲလူကိုလွယ်လွယ်ကူကူဘဲကျွန်းကနေထွက်ပြေးခိုင်းပြီးဘန်ကောက်လေဆိပ်ကနေတန်းပြေးတာဘဲ..သူက အဓိကသက်သေဘဲ..ဒါကိုအမှုဖြစ်စဉ်တစ်​လျှောက်လုံး သက်သေခေါ်စစ်တဲ့ထဲမှာဒီလူကိုဖျောက်ထားတယ်..အမှန်တရားကသိပေမယ့်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး..ထိုင်းနိုင်ငံက […]
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၈ ရက်နေ့မှာတော့ ကိုရီးယားမင်းသမီး Han Jisung ဟာ အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ကား ၂ စီးဆင့်တိုက်ခံရမှုကြောင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတယ်။ အင်ချွန်းလေဆိပ်ကိုသွားတဲ့ အမြန်လမ်းတစ်နေရာမှာ တက္ကစီတစ်စီးနဲ့ အိမ်စီးဆလွန်းကားတစ်စီးရဲ့ ဆင့်တိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Han Jisung ဟာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့အတူသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ခရီးသည်ခုံမှာ […]
သတ်ပြီး အလောင်းဖြောက်ခံရတဲ့ ကလေးက အိပ်မက်ထဲမှာ လက်ညှိုးထိုးပြတဲ့နေရာ တူးကြည့်လိုက်သောအခါ
March 17, 2019 Thuta Star 0
ကလေးတစ်ဦးကိုသတ်ပြီးအလောင်းဖျောက်မှု၊အိပ်မက်ပေးလို့ အလောင်းကို ရှာဖွေတူးဖော်ကြည့်တဲ့အခါ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ပရာချူအပ်ခီရီခန်းပြည်နယ်၊ ဟွာဟင်ခရိုင်အတွင်းမှာ သစ်ပင်ပေါ်ကကိုးနှစ်သားလေးတစ်ဦးကိုသေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်သေဆုံးစေခဲ့ကာ အလောင်းကိုမြေမြှပ်ခဲ့သူ (၃၈)နှစ်အရွယ်အမျိုး သားက ကလေးနဲ့ရှဉ့်မှားပြီး ပစ်ခတ်ခဲ့မိတယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ ဟွာဟင်ခရိုင်ရဲတပ် ဖွဲ့ရဲ့အတည်ပြုချက်အရ ဟွာဟင်ခရိုင်အတွင်းရှိ ကျေးရွာတစ်ရွာမှာ နေထိုင်သူ ပရမ်မွတ်ခ်ခိုဆင်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ ည(၁၀)နာရီဝန်းကျင်မှာ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တရားခံက […]
နာမည်ကျော် အငြိမ့် မင်းသမီး ကားတိုက်မှုတွင် သေဆုံး။
February 8, 2019 Thuta Star 0
ထိုင်းနာမည်ကျော် ရိုးရာအငြိမ့် မင်းသမီး ကားတိုက်မှုတွင် သေဆုံး February 8,2019 နယ်ကို ဇတ်ကဖို့သွားရင်း ဒီကနေ့ နံနက်ပိုင်းက ကားတိုက်မှုမှာသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ထိုင်း ရိုးရာ ကဇတ်ပွဲ အငြိမ့်မင်းသမီး “”ပို””ပရထုန် ဖြစ်ပါတယ်။ အငြိမ့်ကဖို့ခွန်ကင်ခရိုင်ကို အသွား အဝေးပြေး […]
ကလေးဘ၀မှာ တံတားပေါ် စွန့်ပစ်ခံရတဲ့ မိန်းကလေးက သူ့မင်္ဂလာဆောင်ကို မိဘရင်းတွေ လာပေးဖို့ ရုပ်သံကနေ အသနားခံ
January 18, 2019 Thuta Star 0
တရုတ်နိုင်ငံက မိန်းမပျိုတစ်ဦးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ် ကလေးဘ၀အရွယ်လေးမှာ အန်ဟွေးပြည်နယ် ဖူယန်းမြို့က တံတားတစ်စီးပေါ်မှာ စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ခုအချိန်မှာ အသက် ၂၀ ရှိလာတဲ့ ဒီစွန့်ပစ်ခံကလေးမလေး ကျန်ရှောင်ယင်းဟာ လာမယ့် သောကြာနေ့မှာ မင်္ဂလာဆောင်တော့မှာ ဖြစ်တာကြောင့် သူ့မိဘရင်းတွေကို လာတက်စေချင်ပြီး အသနားခံလျက်ရှိနေပါတယ်။ဖူယန်းရုပ်မြင့်သံကြားနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ကျန်ရှောင်ယင်းဟာ မြို့နေ […]
မင်္ဂလာဦးညမှာ သတို့သမီး မူးနေတုန်း သတို့သားမဟုတ်တဲ့ တစိမ်းလူက ၀င်အိပ်
သတို့သား အမှတ်နဲ့ သူစိမ်းတယောက်ကို ညမှောင်မှောင်မှာ အလိုလိုက်ခဲ့တဲ့ သတို့သမီး သတို့သမီး တစ်ဦးဟာ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ ညမှာပဲ အခြား အမျိုးသား တစ်ဦးကို သူမ ခင်ပွန်း ထင်ပြီး အလိုလိုက်ကာ အတူ အိပ်မိခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက် တစ်ခုကြောင့် ဘဝပျက်လုနီးပါး ခံစားသွားခဲ့ ရပါတယ်။ မင်္ဂလာပွဲ […]
အရက်စက်ဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ အဓမ္မကျင့် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ (၁၆)နှစ်အရွယ် အိန္ဒိယသူလေး
January 14, 2019 Thuta Star 0
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဂါယာပြည်နယ်၊ ဘီဟာမြို့မှာ အသက်(၁၆)နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးဟာ အုပ်စုဖွဲ့အဓမ္မကျင့်ခံရပြီးနောက်၊ ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ ကောင်မလေးဟာ မရှုမလှသေဆုံးနေပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ “Honour killing”လို့ အမည်တပ်ခဲ့ပါတယ်။ Honour killing ဆိုတာ မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ မကျေနပ်လို့၊ ၎င်းတို့ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေလို့ ၊ ဇာတ်နိမ့်သူနဲ့ […]
ဖခင်ရဲ့ နောက်ဆုံးဆန္ဒအတွက် အဖေါ်ချွတ်မယ် အယောက် (၅၀) ငှားပီး တိုင်ပတ်အကနဲ့ အသုဘကို စည်ကားစွာ ကျင်းပပေးခဲ့တဲ့သား (ရုပ်သံ)
ဟောင်ကောင်နိုင်ငံက အစိုးရ အမှုထမ်း အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ အသုဘ အခမ်းအနားကို အဖော်အချွတ် အကမယ် အယောက် ၅၀ နဲ့ စည်စည်ကားကား အသုဘ ပို့ဆောင်ခဲ့တယ် လို့ သိရပါတယ်။ အသက် ၇၆ နှစ်အရွယ် ရှိတဲ့ ဟန်ဆန် ဆိုသူရဲ့ နာရေး အသုဘပို့ဆောင် မှုမှာ […]